Phone Internet ama lambarka taleefanka dalwaddii kuu ogolaanayaa inaad si ay u soo bandhigaan degaanka ah tiro-xataa haddii aanay meesha aad jirka. Haddii aad tahay in aad gaariga, guriga, ama xafiiska, u gudbinaya calls, oo aad lambarada giraan sequentially ama isku mar, hadba kii kuu haboon. Waa in la samaysan karta in daqiiqo oo la shaqeeya telefoon kasta oo jira. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad mar dambe ayaa xiiseyneysa, raaxo ama kaliya aad dooneyso inaad kordhiso gaarka ah, waxaad had iyo jeer kala cadeeyo kartaa lambarka telefoonka internet oo gebi ahaanba. Wax macno ah ma qaataan waqti badan in ay ka saarto lambarka. Hoos waxaa ku qoran talaabo talaabo tilmaamaha.
Sidee Si Cad lambarka taleefoonka Internet
Tallaabada # 1:
Laga soo bilaabo goobo gaar ah ama matoorada raadinta, isticmaalaan qalab kasta oo ka saarida online in ay leeyihiin waxaa laga yaabaa in macluumaadkaaga. Google qorin Magaca saarista qalab, tusaale ahaan, tirtiro dhammaan xogta aad ka Google baaritaan. Matoorada kale raadinta waxaa laga yaabaa in ka badan ama ka yar qaababka la mid ah.
Tallaabada # 2:
Tusiyayaasha waa mid ka mid ah meelaha ugu badan ee Internet-ka in ay muujiyaan macluumaadkaaga, iyaga baadhaan oo weydii inaad ka saartid. Xaaladaha intooda badan, waxaa laga yaabaa in aanay muuqan ka matoorada raadinta, laakiin waxa ay weli ka maqnaan doona waxaa. Ogow in goob kasta way ka duwan tahay, oo sidaas daraaddeed waxaa muhiim ah si loo baadho.
Tallaabada # 3:
Si aad u soo saarto macluumaadkaaga, isticmaasho adeeg la bixiyey. Waxaa jira toban qalab sumcad tacking in ay ka qiimo bixinta. Daafaca-SAMIDA waa mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan oo kaa caawin saari macluumaadka sababtoo ah waxaa uu awood u leeyahay in si joogto ah uga saarto iyo socdo wixii macluumaad noqdaan Qadeyn ah. Haddii aad doorato la socodka joogtada ah, waxaad u baahan tahay inaad lacag bixiso bil walba.
Sidee Si Cad Kaydinta Phone In Android
Kiniiniyada iyo telefoonada xasuusta gudaha weyn. Haddii aad soo baxeen oo meel bannaan oo u xog ama daadiyo, waxaa jira talooyin aad isticmaali karto si lacag la'aan ah ilaa meel.
Tallaabada # 1: Hubi Imisa Space aad leedahay Free
Si aad u ogaato, la furo Settings ah. Tag SD & kaydinta telefoonka, oo hubi kaydinta phone Gudaha iyo meel laga heli karaa:
Tallaabada # 2: uninstall Apps in aanad isticmaalin
Soo saarida barnaamijyadooda mar dambe ma aad u baahan tahay mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud oo bilaash ah ilaa megabytes meel bannaan. Tag Settings, ka dibna dooran Apps iyo ugu dambayntiina, uninstall software-ka aan loo baahnayn.
Tallaabada # 3: Downsize ama u guuraan sawiro aad
Sawiro qaataan badan oo boos xogta, si yaraynta ama iyaga u dhaqaaqo drive computer ah ee adag tahay fikrad fiican. Iyaga Backing ilaa daruurtii, sida WordPress, Picasa, Flickr, ama Google+, waa fursad kale. Haddii kale, app sida dib ugama noqon Image Avg ee hoos u xajmiga iyo xallinta sanamyadiinna.
Tallaabada # 4: saar Videos
Videos mashquulin badan oo boos oo si iyaga u dhaqaaqo daruurtii, si aad u computer, iyo geliyaan kuwa si YouTube caawin kara badan.
Tallaabada # 5: Delete Music
Haddii aad soo guuriyeen music badan oo qalab aad, oo waxay iska qaataan badan oo boos ee mustaqbalka fog. Halkii lagu kaydiyo faylasha aad, tixgelin adeeg geeyo music oo bilaash ah ilaa aad kaydinta.
Tallaabada # 6: Delete Downloads
Fiiri buugga download iyo arko haddii ay soo bixi qaar ka mid ah files waaweyn. Files noocan oo kale ah in la tirtiro, haddii aadan u baahan dambe.
Tallaabada # 7: Eeg fayl badan oo kale oo Files
Isku day inaad baadhitaan Settings ah, ka dibna Apps, ka dibna ugu dambayntiina ay tagaan MISC. Marka habkan, waxaa laguu soo bandhigay doonaa la files. Haddii ay jiraan faylal in aan loo baahnayn, isla markiiba ka saar. Si aad u aragto waxa ay dhab ahaan waa meel bannaan oo aad kaydinta degan; heli app sida Isticmaalka Disk & Kaydinta Analyzer kaydinta loo Isticmaalo.
Tallaabada # 8: Nadiifi Cache ku
On telefoonka ah Android, isku day in ay nadiifiso khasnado ee "Maamul Codsiyada My." Haddii aad isticmaasho iPhone ah, guji app in hoos qoran "Isticmaalka" si ay u hubiso in files xogta dheeraadka ah waa la tirtiri karaa.
Tallaabada # 9: saar Bloatware
Bloatware waa magaca wadajir ah loogu talagalay barnaamijyadooda aan waxtar lahayn in side telefoon kasta ama soo saaraha ayaa hore lagu rakibay-. Marka ugu horeysa, barnaamijyadooda aan waxtar lahayn ma laga saari karaa, haddii aad tahay geesi ah oo ku filan si loo raad raaco isha, waxaad yeelan doontaa in laga takhaluso bloatware karin.
Sida loo kala cadeeyo telefoonka ee macruufka kaydinta
Arinta ugu dhibsado waa marka aad iPad iyo iPhone egyahay ah meel lagu kaydiyo oo aan waxaad riixi kartaa sawiro, ama dayactir ku rakibi barnaamijyadooda cusub tan iyo Ota ay u baahan tahay meel bannaan oo lacag la'aan ah lagu kaydiyo of3.1GB.
Tallaabada # 1: Delete Apps uma baahnid inaad
Faa'iidada ugu weyn ee Chine la tirtiro waa xaqiiqda ah in aad lacag la'aan ah ilaa 500MB aan dadkaas oo dadaal aad u badan. Si aad u tirtirto, riix icon ah, sug jawaabta, oo ka jaftaa X ee geeska bidix. Tan iyo maraakiibta Apple telefoonka la daadiyo pre-rakibay, qaado ogow in ay jiraan barnaamijyadooda yihiin in ay adag tahay in ay tirtirto.
Tallaabada # 2: Photos oo cad iyo Videos
Haddii aad tahay qof ka soo noqnoqda ee kamarad, aad Videos iyo Photos soo afjaro laga yaabaa ilaa Cunidda badan oo boos. Tani ma aha in la yiraahdo waxaad u baahan tahay in aad joojiso qaadashada qaar ka mid ah sawirada iyo videos, tallada ugu fiican yahay si ay u gudbiyaan files kuwaas oo si aad computer. Si aad u dajiyaan sawiro aad, isticmaali iPhoto ama Windows 'Video soo dejiya iyo Sawiro hidi. Waxa kale oo aad soo dhoofsadaan kartaa sawirro aad u DropBox.
Tallaabada # 3: saar Photo Stream
Oo sanamyada in il sawir aysan xal buuxa, laakiin weli qaato badan oo boos. Haddii aad ka heli kartaa meel dheeraad ah, dami aad Photo Stream ag maraya in goobaha, ay doortaan Camera & Sawirro iyo deselect My Photo Stream.
Tallaabada # 4: Delete Messages
iMessages, kuwa la video oo sawir ku lifaaqan qaadan kartaa ilaa badan oo boos aan soo socda si aad ogeysiin. By furitaanka Fariimaha iyo weerar dadban ka xaq u leeyahay inuu ka tagay, tirtirto threads iMessage. Waxa kale oo aad tirtiri kartaa fariin kasta oo si gaar ah looga faa'idaysan by dheer oo ku saabsan xumbo chat ah, in ka badan ka jaftaa ka dibna tirtirto fariimaha aan la rabin.
Tallaabada # 5: saar iBooks aan loo baahnayn
Haddii aad qabto iBooks bixi in aad iPhone, iyaga tirtirto bixinta in ay weli waxaa laga heli karaa in iCloud.
Tallaabada # 6: Isticmaal Lugood Match
Waxaad karayn inuu dhagaysto track kasta oo aad heli karto daruurtii via noqon doonaa haddii aad saxiixdo Lugood kulanka. Sidaa darteed aad u badan oo meel badbaadin karo ka iPhone sababtoo ah uma baahnid inaad si loo badbaadiyo track kasta.
Riix in ay nadiifiso gaarka ah oo dhan ee aad iPhone / iPad
Wondershare SafeEraser waa codsi lagu kalsoonaan karo oo awood leh in tirtiro oo ka kooban qalab macruufka. Wuxuu ka hortagaa xog ama macluumaad aad markii aad rabto in aad ku deeqdo ama iibin telefoonka. Waxa kale oo ay kaa caawinaysaa in aad soo saarto wax kasta oo loo marayo habab saarista joogta ah oo ammaan ah. Barnaamijka waxaa si fiican u habboon kala duwan oo ballaaran qalabka macruufka, sida iPad, iPod iyo iPhone. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira 3 heerka ammaanka si tirtiraynaa xogta:
(1) 1-pass geynta, taas oo amaan ah, laakiin waxay qaadataa waqti yar si ay u dhamaystiraan,
(2) Habka heer dhexdhexaad ah, taas oo uu isticmaalaa 2 baas in overwrite files xogta; iyo
(3) in tiirsan ku DoD 5220 caadiga ah, taas oo ka dhigaysa isticmaalka technology ah fasalka military si ay u masixi macluumaadka.
Daah-Wondershare software SafeEraser, dooran masixi All Data , oo guji.
Tallaabada 2. Dooro tirtiro xogta
Waxaa jira 3 heer oo tirtiro xogta. Si toos ah gudasho la'aanta in overwrite aad macruufka qalab la files junk si ay u sameeyaan qaarkood in files ma waxay yihiin. Qabka ugu fiican oo arrintan ku saabsan waxaa aad saaray dhammaan xogta.
Tallaabada 3. saar xogta ku saabsan iPhone
Si aad doorato mid ka mid ah oo dhexdhexaad ah, riix badhanka Start iyo in la hubiyo in aad xoojiyaa xogta aad iyo horay u socdo. Nooca iyo talooyin ku cad sanduuqa. Marka sameeyo, guji Xaqiiji. Halkan, barnaamijka bilaabo tirtiro xogta oo dhan sida hoos ku qoran.
Tallaabada 4. Isticmaal qalabka macruufka
Marka ay si buuxda u tirtirayaa, waa sida ugu fiican ee qalab cusub uu noqon doono.
> Resource > masixi > Full Guide in ay nadiifiso Your Phone